Inkampani yaseNtaliyane yefashoni iphumelela idabi neApple ngokusetyenziswa kwegama elithi "Steve Jobs" | IPhone iindaba
Inkampani yefashoni yase-Italiya iphumelela idabi ngokuchasene neApple ngokusetyenziswa kwegama elithi "Steve Jobs"
Kwilizwe lezoshishino kukho oosomathuba abaziyo ukusebenzisa ithuba elifanelekileyo kunye nendawo ukuze bakwazi ukufumana izibonelelo ezinkulu ngokuxhaphaza abanye abantu. Iitroll patent ngumzekelo ocacileyo wento endithetha ngayo, kuba ezi ntlobo zeenkampani zinikezelwe ukuthenga iinkampani ngenani elikhulu amalungelo obunikazi egameni lakho kwaye oko kuyakukhutshwa ukuba inkampani ekugqibeleni ivale iingcango zayo.
Kwelinye icala, sifumana ezinye iinkampani ezifuna ukuthatha ithuba lokutsala umsitho, igama lemveliso okanye lomntu ukufumana ngokukhawuleza imarike. Owona mzekelo ucacileyo, kwaye unxulumene no-Apple, ufumaneka kwinkampani yefashoni yase-Italiya eyabhalisa igama elithi "Steve Jobs" njengophawu lwentengiso ngo-2012. Iqela lezomthetho lika-Apple liphezu kwabo.
Abazalwana uVincenso noGiacomo Barbato, babhalisa igama elithi "Steve Jobs" njengomgca wemveliso, emva Qinisekisa ukuba inkampani esekwe eCupertino ayinamalungelo kuyo. Ngokwabazalwana bakaBarbao kwiphephandaba iRepubblica Napoli:
Senze isifundo sentengiso saza saqinisekisa ukuba iApple, enye yeenkampani zetekhnoloji yehlabathi, yayingazange ilibhalise igama lomsunguli wayo njengophawu, saye sagqiba ekubeni senze njalo.
Isimangalo sika-Apple malunga nale nkampani yamkelwa yiNkundla yePropati yobuNini ye-EU kwi-2014, Kodwa bekungekabikho kude kube ngoku, xa abazalwana bekwazile ukuthetha ngale nkqubo, kuba yayiziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo xa u-Apple ekugqibeleni wayengenayo enye indlela esemthethweni yokuphepha ukwenza ishishini esebenzisa igama lomseki walo.
Okokuqala, iApple yamangalela inkampani ngokusebenzisa igama likaSteve Jobs. Njengoko wabona ukuba lendlela ayinandlela yakuphuma emva kokuba inqatshelwe yiNkundla yaseYurophu, wayesiya kwi logo esetyenzisiweyo, engu "J" ebonisa ukuluma kwelinye lamacala ayo, ilogo ethi ngokucacileyo ayikophuli nayiphi na uyilo lwenkampani yaseMelika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Inkampani yefashoni yase-Italiya iphumelela idabi ngokuchasene neApple ngokusetyenziswa kwegama elithi "Steve Jobs"
Impikiswano iyaqhubeka, eKorea bafuna inkcazo malunga nokwehla kwe-iPhone
I-Apple iceba ukuvula iVenkile yokuqala yeApple eSaudi Arabia ngo-2019